Ukuguquka kwesimo sezulu kungadala ukulahleka okukhulu kwengcebo e-US | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukuguquka kwesimo sezulu kuyinhlekelele emhlabeni. Amazwe amaningi angalahlekelwa yingcebo yawo uma imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu iqhubeka. Uma kungekho zinyathelo ezithathwayo ukulungisa lokhu, IMelika izolahlekelwa ngumcebo omkhulu kunayo yonke emlandweni wayo.
Imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ingaveza umehluko omkhulu phakathi kobuphofu nokungalingani phakathi kwamazwe aseningizimu nasentshonalanga nentshonalanga. Yini engenzeka ngengcebo yaseMelika?
Ukuguquka kwesimo sezulu kudala ubumpofu
Kwenziwe ucwaningo eNyuvesi yaseCalifornia eBerkeley ngezindleko ezingatholakala ekushintsheni kwesimo sezulu uma siqhubeka nendlela esikuyo manje. Umcwaningi obhekele lolu cwaningo, uSalomon Hsiang, uthi uma siqhubeka ngesilinganiso samanje sokukhishwa kwegesi engcolisa umoya, Kungaholela ekudlulisweni kwengcebo enkulu kakhulu isuka kwabampofu iye kwabacebile kuwo wonke umlando wase-US.. Ukuhlaziywa kuqinisekisa ukuthi ingxenye yesithathu empofu kunazo zonke izifunda "ingalimala ngokomnotho okungabiza kuze kufike ku-20% wemali engenayo uma ukufudumala kuqhubeka kunganqandeki."
Amazwe asengxenyeni eseningizimu nengxenye engezansi yeMidwest yiwona azolahlekelwa ngamathuba amaningi ezomnotho njengoba eba mpofu futhi efudumele. Ngakolunye uhlangothi, amazwe abandayo emngceleni osenyakatho nasezintabeni iRocky, azohlomula ngokushintsha kwesimo sezulu njengoba ezokwenza ngcono izindleko zezempilo, ezolimo namandla.
Ithimba labacwaningi libala ukuthi ukukhuphuka kwezinga elilodwa le-Fahrenheit emazingeni okushisa omhlaba kuzobeka ubunzima emnothweni wase-U.S ukulahleka okulinganiselwa ku-0,7% womkhiqizo wayo ophelele wasekhaya (i-GDP), yize izinga ngalinye lokushisa okwengeziwe lingabiza ngaphezu kokugcina.
Ekugcineni, ezinye izilinganiso zesimo sezulu zenzelwe ikusasa lapho kulindeleke khona ukwanda kolwandle kanye nesidingo sokuthuthela ezindaweni eziphephile zabo bonke abantu abahlala emadolobheni asogwini.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu kungadala ukulahleka okukhulu kwengcebo e-US
Ziguqula izinkomo zofuzo ukuze zikwazi ukumelana nokushisa komhlaba